१२ लाखमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर – यसरी बनाइन्छ ! थाहा पाइराखौ ! – Ramailo Sandesh
काठमान्डौ : के तपाई घर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ ? कम भन्दा कम लागत र समयमा सुन्दर घर बनाउने कल्पना मध्यम बर्गिय नेपाली परिवारको रहेको छ । घर बनाउन लाग्ने खर्च, समय आदीले गर्दा धेरैले घर बनाउने योजनालाई सार्दै लैजाने गर्छन् ।
अहिलेको चलन चल्तीको ४ कोठा भएको एक तले घर बनाउन न्यूनतम पनि ३२ देखि ३५ लाख सम्म खर्च लाग्ने गर्छ । यो मूल्यमा घर बनाउन लामो समय लाग्ने हुनाले झन्झटिलो ठान्ने गरिन्छ । घर बनाउन देखिने यही झन्झटिलोलाई हटाउन पछिल्लो पटक कोरियन प्रविधि नेपाल भित्रिएको छ ।
आरसीसी प्रविधिको तुलनामा कोरियन प्रविधिबाट एक तले घर बनाउँदा ३० प्रतिशत सम्म सस्तो पर्छ ।’ घर बनाउने समयको कुरा गर्ने हो भने त झनै आरसीसी प्रविधिबाट बनाइएको घर भन्दा करिब ८० प्रतिशत छिटो तयार हुन्छ ।
कोरियन प्रविधि अनुसार घर निर्माण गर्न अहिले एसवाई प्यानलले सक्रियता देखाएको छ । यो प्रविधि अनुसार ४ कोठा भएको घर, कङ्क्रिटको प्रयोग गरेर बनाइएको घरको तुलनामा धेरै सस्तो, चाँडो निर्माण हुने र टिकाउ समेत हुने दावा गरिएको छ ।
कोरियामा लोकप्रिय मानिएको यो प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो इच्छा अनुसार डिजाइनमा एक महिना भित्र चिटिक्क परेको घर तयार हुने एसवाई प्यानलका सिभिल इन्जिनियर तथा मार्केटिङ म्यानेजर विमलराज गोसाई बत्ताउँछन् ।
उनका अनुसार ‘आरसीसी प्रविधिको तुलनामा कोरियन प्रविधिबाट एक तले घर बनाउँदा ३० प्रतिशत सम्म सस्तो पर्छ ।’ घर बनाउने समयको कुरा गर्ने हो भने त झनै आरसीसी प्रविधिबाट बनाइएको घर भन्दा करिब ८० प्रतिशत छिटो तयार हुन्छ ।
कोरियन प्रविधि अनुसार एक तले घर बनाउँदा २ देखि साढे दुई फिट जमिन खनेर फलामको पोलहरू गाडेर कङ्क्रिटले ढलान गरिन्छ । घर बनाउँदा जमिनमुनि गरिने फाउन्डेसनको काम आरसीसी र कोरियन दुवै प्रविधिको घर बनाउँदा एकै किसिमको हुन्छ ।
कोरियन प्रविधिको फेब्रिकेन्टले घर बनाउँदा पनि जमिनमुनि गिट्टी, बालुवा, डन्डी र सिमेन्टबाटै संरचना निमार्ण गरिन्छ । गोसाइका अनुसार चार कोठाको फेब्रिकेटेड घर बनाउँदा ७ सय वर्ग फिट कभरेज हुन्छ ।
सामान्यतया आरसीसी प्रविधिको प्रयोग गरेर ४ कोठे भएको एक तले घर निर्माण गर्दा ६ देखि सात महिना लाग्छ । तर कोरियन प्रविधिको प्रयोग गरेर यही क्षेत्रफलको घर बनाउन एक महिना लाग्छ । यदि घर धनीले अझ चाडै निर्माण सम्पन्न चाहेमा १२ देखि १५ दिनमा पनि तयार गर्न सकिन्छ ।
७ सय बर्ग फिटमा एक तले फेब्रिकेटेड घर बनाउन प्रति बर्ग फिट १८ सय रुपैयाँका दरले १२ लाख रुपैयाँको हाराहारी खर्च हुन्छ । वाल, झ्याल, ढोका, किचन, बाथरुम, भर्‍याङ, छानो सबै यही खर्च भित्र पर्न आउँछ ।
कति खर्च लाग्छ
आरसिसी प्रविधिको एक तले ४ कोठाको घर बनाउन ३२ देखि ३५ लाख सम्म खर्च लाग्न सक्छ । कोरियन प्रविधिको ४ कोठा र एउटा बाथरुम भएको घर बनाउन १२ देखि १४ लाख रूपैंयामा तयार हुन्छ । कोरियन प्रविधिबाट एक तले घर बनाउँदा डबल टाइपिङ र हात्तीपाइले बनाउन नपर्ने भएकोले खर्च कम लाग्छ ।
जमिनभन्दा माथि कोरियन प्रविधिको फेब्रिकेटेड निर्माण सामाग्री प्रयोग गरिन्छ । गोसाईका अनुसार ७ सय बर्ग फिटमा एक तले फेब्रिकेटेड घर बनाउन प्रति बर्ग फिट १८ सय रुपैयाँका दरले १२ लाख रुपैयाँको हाराहारी खर्च हुन्छ । वाल, झ्याल, ढोका, किचन, बाथरुम, भर्‍याङ, छानो सबै यही खर्च भित्र पर्न आउँछ ।
घरको अर्को विशेषता भनेको यो घर वातावरण मैत्री पनि छ । ‘जाडो मौसममा घर भित्रको वातावरण न्यानो हुन्छ भने गर्मी मौसममा घर भित्रको तापक्रम शीतल हुन्छ’ ।
कोरियन प्रविधिको घर बनाउँदा थुप्रै फाइदाहरू रहेको यसमा इन्जिनियर गोसाई बताउँछन् । यो प्रविधिले कम खर्च र कम समयमै आकर्षक घर बन्नु नै यसको मुख्य विशेषता हो । यसको साथै यो प्रविधिको घर भूकम्प प्रतिरोधी पनि रहेको छ । बि.स. २०७२ सालको महाभूकम्पले धेरै घरहरूको क्षति भयो भने कतिपय व्यक्तिहरूको आफ्नै घरले किचेर मानवीय क्षति समेत भयो । त्यसैले कोरियन प्रविधिको घर भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ नै साथै घरको भार कम हुने हुनाले यदि ढलिहाल्यो भने पनि यसले कुनै मानवीय क्षति गर्दैन ।
नेपालीहरूको आयस्रोत कम हुने भएकोले धेरैको घर बनाउने चाहना पुरा नभएको अवस्थामा कोरियन प्रविधि अर्को विकल्पको रूपमा देखिएको छ ।
यो प्रविधिको प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको घरको आयु ३५ देखि ४० वर्षको हुन्छ । यसलाई नियमित मेन्टिनेन्स गर्ने हो भने यसको आयु अझ बढाउन सकिन्छ ।
यो घरको अर्को विशेषता भनेको यो घर वातावरण मैत्री पनि छ । गोसाईका अनुसार ‘जाडो मौसममा घर भित्रको वातावरण न्यानो हुन्छ भने गर्मी मौसममा घर भित्रको तापक्रम शीतल हुन्छ’ ।
नेपालीहरूको आयस्रोत कम हुने भएकोले धेरैको घर बनाउने चाहना पुरा नभएको अवस्थामा कोरियन प्रविधि अर्को विकल्पको रूपमा देखिएको छ । – मेरो लाइफ स्टाइल बाट
भारतमा फेरि भ’याभह बन्दै कोरोना: एकै दिन थपिए ४७ हजार संक्रमित, २७५ जनाको मृ’त्यु
नेपालसँग गहिरो सम्बन्ध भएका यि भारतीय चर्चित कलाकारहरु…